Yaa Xasuus Muddan? Wadaniga – Rasaasa News
Jan 21, 2010 Dr. Dolal, ONLF
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya, waxay wali iloobi la,a yihiin geesigii ka baxay, waxayna goob kasta oo ay ku kulmaan dhinacyadooda iyo dharkooda ka muuqda muuqaaladiisii iyo waliba hal ku dhagyadiisii uu halganka u adeegsan jiray.
Qoraalkan waxaan ka soo xiganay bogga Ogaden.info oo ku hadla afka halganka ay wado Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo].
Kulan Lagu Xusuusanayey Naftiihure Dr. Mohamed Siraad Dolal oo Kenya ka Dhacay
Shir si wanaagsan loo soo agaasimay oo lagu xasuusanayey Naftood hurayaashii Halganka ay wado ONLF buddhigaha u ahaa, kuna shahiiday oo ka dhacay degmada Dhadhaab, waqooyi bari ee Kenya.
Daawo Sawirada Shirka. Degmada Dhadhaab oo ka kooban sadex xaafadood oo isu dabo jeedis ah, ayaa waxay hoy u tahay boqolaal kun oo qaxooti ah oo ka soo cararay cariga Somalida Ogadeeniya, dadkaas oo qaarkood ay yihiin qaxootigii 1977, qaarna ay yihiin qaxooti cusub oo ilaa maanta ku qulqulaya halkaasi, cadaadiska kaga imanaya Itobiya dartiis.
Waxaa si xad dhaaf ah u jooga dalka Kenya N/hurayaal u yimid sababo kala duwan, oo ay ugu badan tahay Jwxo-shiil iyo dhibaatooyinka uu N/hurayaasha kula kacay.
Kulanka maalintii January 17, 2010, ka dhacay Dhadhaab ayaa waxaa uu ahaa mid ayna u kala hadhin dadweynaha degan Dhadhaab. Dadka ka soo qayb galay ayaa waxay ahaayeen xubnaha Jwxo, taageerayaalka Jwxo iyo wax garadka degmada Dhadhaab, dhamaan dadkani waxaa laga dareemayey wajiyadooda taageerada ay u hayaan halganka uu horseedka ka yahay maanta Golaha Sare ee ONLF iyo sida ay ugu xun yihiin ilaa iyo maanta dilkii foosha xumaa ee loo gaystay halgame Dr. Dolal iyo Jamaal Dheere.
Waxaa ugu horeynba kulanka hadalo furitaan iyo soo dhaweyn isugu jira ka soo jeediyey shir gudoonka Axmed Dheere, oo ah xubin gole dhexe ee ONLF, waxaana uu Axmed uga mahad naqay ka soo qayb galayaashii shirka is xilqaanka ay muujiyeen iyo sida ay ugu dhago nugul yihiin halganka Ogadeeniya.
Sheekh Maxamuud Caabi Cabdulahi oo ah sheekh caan ah ahna kana mid ahaa Jabhadihii 1977, ayaa waxaa isna halkaasi aayado Quraan ah iyo hadlo wacdi ka soo jeediyey kulanka ka dhacay degmada Dhadhaab.
Waxaa hadalkii qaatay, halgame Maxamuud Maxamed Haaji oo ah xubin golaha dhexe ee ONLF, ahan wakiilka Afrikada Bari u fadhiya Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], ayaa waxaa uu halkaasi ka jeediyey taariikh nololeedkii Dr. Maxamed Sirad Dolal, hadalkaas oo runtii qiiro galiyey dadka jecel halganka Somalida Ogadeeniya, Haajir waxaa uu yidhi “Dr. Dolal waxaa uu ahaa malaa,ig loo soo diray Ogadeeniya, nasiib daro waxaa uu shahiiday isaga oo aan gaadhin hadafkii halgan ee uu lahaa, dhamaystirka halganka waxaa looga baahan yahay da,a yarta Somlida Ogadeeniya ee maanta nool”.
Cabdi Xareed Cabdi Xasan Khaliif, oo isaguna ku hadlayey magaca N/hurayaasha ayaa hlkaas ka soo jeediyey hadal qiiro leh waxaana uu yidhi “N/huruhu waa ruuxa ugu qiimiga badan bulshada, haduu nool yahay iyo haduu dhintaba, waayo waxaa uu xambaarsan yahay taariikhda ummada” Mudane xareed waxaa uu sharxay N/hurayaasha jooga Bariga Afrika in ayna ka daalin halganka, laakiin ay halkan ku yimaadeen dhibaatooyin uu abuuray Jwxo-shiil. Waxayna wadaan sidii ay halganka ugu soo celin lahaayeen dhabihiisii kana saaraan sumcad xumada uu Jwxo-shiil gayeysiiyey halganka Somalida Ogadeeniya.
Suldaan Kaahin Cali, ayaa isna ka sheekeeyey aqoontii shakhsiyadeed ee uu u lahaa Dr. Maxamed Sirad Dolal, isaga oo aad ugu amaanay dad iyo dal jacaykii uu lahaa N/hure Dr. Dolal.
Ugu dambayntii waxaa hadal dheer oo ku saabsan halganka iyo meesha uu maanta marayo soo jeediyey Axmed Nuur Yusuf Ali. Mudane Yusuf oo ahaa xubin ka tirsan N/hurayaasha Jwxo, waxaa uu yidhi “halgankii ay Jwxo waday maanta waxaa uu marayaa meel adag, waxaana uu u baahan yahay wax qabad weyn ka dib markii uu dhibaato aan laga soo waaqsan karin u gaystay ninka maanta loogu yeedho [Jwxo-shiil] Maxamed Cumar Cisman”. Mudane Yusuf waxaa uu ku baaqay in taagero buuxda la siiyo golaha sare ee Jwxo oo iyagu ku hawlan dabo qabashada halganka la hambooriyey.
Daweynihii meesha isugu yimid ayaa waxay aad uga maqsuudeen kullanka oo waji xamaasad leh ku dhamaaday ugu dambayntiina loogu duceey N/hure Shahiid Dr. Dola iyo Jamaal Dheere oo labadooduba si aan mudnayn loogu dilay gudaha Ogadeeniya, sanadkii ina dhaafay bilowgiisii.
Ina Dhuubo oo Ceebtooda Banaanka Soo Dhigay Kuwa ay Kooxda Jwxo-shiil ku Adeegtaan